वर्षदिनमा तीन मेसु फेरिए | चितवन पोष्ट
वर्षदिनमा तीन मेसु फेरिए
भरतपुर । भरतपुर अस्पतालमा छोटो समयमा पुनः मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) परिवर्तन भएको छ ।
गत जेठ २ गते अस्पतालको मेसु बनेका डा. विश्वबन्धु बगालेको ठाउँमा डा. श्रीराम तिवारी आएका छन् । यसअघि डा. तिवारी गोरखा अस्पतालका मेसु थिए । तिवारी ११औँ तहका मेसु हुन् । असार १३ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट तिवारी मेसु भएका हुन् ।
डा. बगाले भने अघिल्लो हप्ता काठमाडौँ गई आफैँ राजीनामा दिएर आएका हुन् । मेसु भएपछि पनि डा. बगाले दुई हप्ताजसो मात्र अस्पतालको नियमित काममा उपस्थित भए । डा. बगालेले भने, ‘जुन उद्देश्य लिएर मेसु भएको थिएँ त्यो पूरा नहुने भएपछि आफैँले छाडेँ ।’
मेसुको जिम्मेवारी लिने क्रममा डा. बगालेले आफू छोटो समयका लागि मेसु भएको बताएका थिए । कर्मचारी समायोजनका कारण आफ्नो कार्यकाल लामो नहुने उनको भनाइ थियो । अस्पतालमा आफू हुनुभन्दाअघिको नेतृत्वले गरेका सबै कमजोरी, दायित्व आफूले लिनुपर्ने दबाब आएपछि दबाबमा काम गर्न नसक्ने भन्दै डा. बगाले पन्छिएका थिए ।
भरतपुर अस्पतालमा वर्ष दिनमा तीन मेसु फेरिएका छन् । एक वर्षअघि डा. रविन खड्काको ठाउँमा नियुक्त भएका डा. कृष्णप्रसाद पौडेल अस्पतालमा ८ महिनामात्रै टिके । लगत्तै, जेठमा पहिलो साता अस्पतालमै कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. विश्वबन्धु बगालेलाई निमित्त मेसुको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सरकार वा सम्बन्धित मन्त्री फेरिएपछि फेरिने गरेको मेसु अहिले एउटै सरकार हुँदा पनि ३ पटक फेरिइसकेको छ । डा. रूद्र मरासिनीको ठाउँमा डा. रविन खड्का, डा. खड्काको ठाउँमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र डा. पौडेलको ठाउँमा डा. बगाले र बगालेको ठाउँमा डा. तिवारी मेसुमा नियुक्त भएका छन् ।